Favourite – Thet Nandar
HTC rezound 4G Android
ဒါ … ကိုယ့်ရဲ့ HTC rezound 4G Android ဖုန်းပါ …. သားသား နဲ့ သမီးလည်း သဘောကျတဲ့ ဖုန်း Youtube လည်း ကောင်းကောင်း ကြည့်လို့ရတယ် … နားကျပ်က Beat နားကျပ်မို့ အသံထွက် အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အိုင်ဖုန်း နားကျပ်ထက်တောင် ပိုကောင်းပါသေးတယ်။ HTC နှင့် iPhone4S တို့ဖြင့် မြင်ရတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ သီရိရတနာ blog HTC က မြင်ကွင်း ပိုပီး ကြီးပါသေးတယ် …. မြန်မာစာလုံးတွေကို လှ လှ ပ ပ ၀ိုင်းဝိုင်းစက်စက်လေး ဖတ်လို့ရတဲ့ အတွက် … IT သမားတွေကို အရမ်း […]
Read More HTC rezound 4G Android